Kalsiyum budada budada, CaB6 - Goodao Technology Co., Ltd.
Waxaa jira iskudhafyo badan oo katirsan B-CA, laakiin midka guud iyo midka xasilloonida leh waa CaB6. Sidaa darteed, kaalshiyamka borid badanaa waxaa loola jeedaa kaalshiyamka CaB6.
Qaab dhismeedka guud ee xeryahooda hexboron waa qaab dhismeedka CsCl. Farqiga ayaa ah in B6 octahedron uu qaato booska Cs.
Caanaha molecular Cab6
Lambarka CAS 12007-99-7
Cufnaanta 2. 33g / cm3
Barta dhalaalida 2230'C
Isticmaala 1, loogu talagalay Baiyun kaarboon iyo magnesium kaarboonka cad ee kaarboonka diidmada ka-hortagga-nabaad-guurka iyo hagaajinta xoogga kuleylka ee boron lagu daro2, naxaasta waxqabadka sare si loo hagaajiyo is-gaarsiinta iyo xoogga agta deoxidizing
3, oo loogu talagalay warshadaha nukliyeerka anti-neutron ee qalabka cusub
4, oo loo isticmaalo heerkulka cusub ee 900K wareegga elektaroonigga ah ee semiconductor-ka cusub
5, soo saarida boron trichloride (BC3) iyo alaabada ceeriin ee boron amophous
6, soo saarida bir bir ah daahirnimo sare (B2, ZB2 HB2, iwm J iyo boronalloy purty sare ah (ni-b, CO-B, CU-B, iwm).
7, oo loo adeegsaday soosaarida hawo ay kujiraan kalsiyum-boron nitride (CA3B2N4) iyo hexagonboron nide isku dhafan oo leh waxqabadkeeda aadka ufiican ee loo yaqaan 'crystalline cubic boron nitd8', oo loo adeegsaday boron alloy cast iron desulfuzation deoxidation boron daro agen agen9 oo loo isticmaalay sidii boron steel desulfunzation deoxo boron metal smelting. deoxidizer
Qaab dhismeedka guud ee xeryahooda hexboron waa qaab dhismeedka CsCl. Farqiga ayaa ah in B6 octahedron uu qaato booska Cs. Xiriirka wadajirka ah ee udhaxeeya BB, dartiis wuxuu leeyahay astaamo barta dhalaalida iyo adkaanta sare. Waxyaabaha ay ka kooban tahay jirka iyo kiimikada waa kuwo xasilloon, marka lagu dhawaaqo hawada, CaB6 ee darajada hoose ee micron waxay soo muuqan doontaa ka dib 800 darajo Celsius kororka kuleylka, ma fududa in oksijiin la sameeyo, CaB6 guud ahaan waa laguma milmi karo aashitada hydrochloric iyo sulfuric acid, sidaa darteed farsamo ahaan si looga saaro wasaqda hydrochloric acid, laakiin CaB6 waa lagu milmi karaa nitric aci.
Tafatirka tusmada jirka iyo kiimikada
1. Kaalshiyamka hexaboride waa budada cawl madow ama walxaha. Barta dhalaalaysa 2230 ℃, cufnaanta qaraabada 2.33g / cm, aan lagu milmin karin biyaha 15 ℃ heerkulka qolka.
2. Silicon boride waa budo dhalaalaya oo madow-cawlan lehna cufnaan dhererkeedu yahay 3.0g / cm iyo barta dhalaalida ee 2200 ℃. Waxtarkiisa shiidi wuu ka sareeyaa kan boron carbide iyo silikoon carbide. Waxay leedahay awood sare iyo xasillooni gaar ahaan hoosta naxdinta kuleylka.
Tifatiraha Ujeedada Weyn
1. Waxaa loo adeegsaday boron lagu daro u adkaysiga u adkeysiga, nabaad-guurka nabaad-guurka iyo xoojinta kuleylka xoojinta dolomite iyo magnesia dolomite refractories.
2. Waxaa loo adeegsaday sidii loo sii deyn lahaa wakiilka gaaska si loo nadiifiyo naxaasta tabarta sare si loo wanaajiyo tabinta iyo xoogga.
3. Waxaa loo adeegsaday maaddo cusub oo caddaynaysa nafaqada leh warshadaha nukliyeerka.
4. Qalabka semiconductor-ka cusub ee loo adeegsaday shirarka iskudhafka leh oo heer kulkiisu yahay 900K.
5. Waxaa loo adeegsaday sida boron alloy cast iron desulfurization iyo deoxidization boron-kordhinta wakiilka.
6. Waxaa loo isticmaalay sidii wax baabiiya, baabi'iya sunta jirka iyo kordhinta boron ee birta boron.
7. Waxaa loo adeegsaday sidii sunta fidisa ee biraha dhalaalin.
Hore: Molybdenum budada budada, MoB2
Xiga: Aluminium budada budada, AlB2
Kalsiyum budada budada ah
Warshadaha budada kaalshiyamka ah
Warshad budada kaalshiyam ah
Soosaaraha Kaalshiyamka budada ah
Soosaarayaasha budada kaalshiyamka ah
Kalsiyum budada budada ah Qiimaha